ogeysiis bishaaro leh – Machadka Iqra
ogeysiis bishaaro leh
machadka iqra waxaa uu ugu bishhreynayyaa dhamaan dadka mulimiinta ah gaar ahaan dadka soomaalida ah in uu bilaabay barashada qur,aanka kariimka oo online ah hadaba kala xiriir 0025290 7725033 ama 252907708880
ogeysiis bishaaro leh	Sheikh Abubakar
Leave a Reply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ujeeddada ugu weyn ee loo asaasay Machadka IQRA	1- in dadka shareecada Islaamka lagu baro , gudaha iyo debeddaba , ayadoo ay joogaan culima heer Qaran ah oo takhasusaad kala geddisan wata, iyo kuwo maaddo walba dhigaya .
2-in lagu ilaaliyo manhajka saxda ah ee Ahlu sunnaha ,laguna barto oo Alla loogu caabudo sida saxda ah oo nebigii diinta ku ogaa.
3- in lasoo saaro dadkii xambaarilahaa masuuliyadda dacwadda islaamka, eeku hogaaminlahaa umadda islaamka ah ee soomaliyeed iyo ciddii la is gaadhaba.
Recent Posts	warbixin kooban ee macadka
مرحبا بمعهد اقرأ . برن / سناج
معهد اقرأ للعلوم الشرعية والعربية برن .سناج
Nagala soo xiriir ciwaanadan hoose	Email: machadkaiqra@gmail.com